Ho an'ilay DJ mahay mandanjalanja izay te-hanao fiantraikany goavana amin'ny fananganana ny marika manokana ho amin'ny ambaratonga manaraka. Hatramin'ny 30 segondra amin'ny fampisehoana feno horonam-peo feno horonan-tsary manodidina ny style sy ny marika. Tena tsara tokoa ny fananganana sehatra iray tena miavaka izay hampiroborobo ny mpihaino ary manamafy ny toerana misy anao amin'ny maha-lanonana ofisialy anao!
SKU: CustomDjVidDrop Sokajy: Uncategorized
Hatramin'ny 30 segondra. Namboarina. Raha vantany vao nividy, dia hanaraka anao izahay mba hahatsapa ny fomba fanao sy ny safidinao.
Perfect video Dj drop to start your set! Horaisina tsara ny sainy. "Ilay lehilahy izay efa niandry anao rehetra." Somebody Screammmmmmm "Izy irery ihany no DJ (ny anaranao). Avy amin'ny (Ny Nightclub na ny orinasa - anaran'ny tanàna)! --- Hitany! (Sfx: fipoahana) Jereo ny lahatsary demo amin'ny hetsika eto ambany! Ampiasao izany tsy misy fiampangana fanampiny!
MIARAKA AMIN'ANDRIAMANITRA! Horonantsary lehibe goavana amin'ny fifindrana avy amin'ny BPM samy hafa! "Ao anatin'ny fifangaroana amin'ireo sy roa (fipoahana), Ity no Dj (ny anaranao) avy amin'ny (CLUB na COMPANY NAME)! * ary ampio ny logos anao ao anatin'ilay lahatsary tsy misy fiampangana fanampiny!
Aza mipetraka amin'ny efijery mainty mandritra ny kitaponao! Na dia tsy manana ny lahatsary ho an'ny hira manokana aza ianao, mbola afaka manisy sary vendrana hitazomana ny haavony. Mbola tsara kokoa, ataovy ho iray amin'ny fehezan-tsarin'ny DJ misy anao, mifanaraka amin'ny anaranao. Ampitomboy ny marika manokana anao ary aza misalasala ny mihevitra fa vita ny kitaponao satria mivoaka ny efijery. Ny fehezan-teny sy ny fandaharana mozika dia azo jerena amin'ity lahatsary ity, mifandraisa aminay amin'ny antsipiriany.
Aza mipetraka amin'ny efijery mainty mandritra ny kitaponao! Na dia tsy manana ny lahatsary ho an'ny hira manokana aza ianao, mbola afaka manisy sary vendrana hitazomana ny haavony. Mbola tsara kokoa, ataovy ho iray amin'ny fehezan-tsarin'ny DJ misy anao, mifanaraka amin'ny anaranao. Ampitomboy ny marika manokana anao ary aza misalasala ny mihevitra fa vita ny kitaponao satria mivoaka ny efijery. Ny lahatahiry ary ny fandaharana mozika dia misy amin'ny lahatsary ity, Mifandraisa aminay amin'ny antsipiriany.
Ny iray amin'ireo horonan-tsary malaza indrindra maneran-tany. Nolavina taorian 'ny malaza "NYE Countdown 2013", efa nataonay izany ho DJ video intro ho an'ny arsenalanareo! Ny anaranao sy ny klioba na ny orinasa orinasa dia ampidirina amin'io lahatsary manokana io raha tsy misy fiampangana fanampiny. "MESAJE ET MESSIEURS, azonao atao ny mijery ny sainao S'IL VOUS PLAÎT! SIGNORE E SIGNORI, azonao averina ny fahafahanao manintona anao!" LADIES AND GENTLEMEN AHOANA IO NO TOKONY HIDITRA AMIN'NY FITIAVANA IZAY LAZAIN'NY BAIBOLY? 'MAHEFA IREO FAHAMARINANA IZANY.' (fipoahana) Dj (ny anaranao) avy amin'ny (CLUB na COMPANY - CITY / TOWN). (Tsy voatery)
Televiziona tsy manam-pahaizana sy tranonkala izay handondona ny kibonao ... amin'ny ANY LANGUAGE! Andeha hampiasaintsika ny loka Telly manokana handresena ny famoronana vokatra famoahana famoronana mba hitondrana ampondra amin'ny varavaranareo amin'ny Taom-baovao! Ny fotoana mitranga dia andro 5-7 androany ... noho izany HURRY mialohan'ny fotoana! Jereo ny anay horonan-tsary ara-barotra video. Aorian'ny fividianana, hifanerasera aminao ny ekipanay mba handamina fivoriana hentitra hamaritana ny tsipirian'ny televiziona misy anao.